Fampiharana tena tsara lavitra noho ny Netflix ary maimaim-poana tanteraka | Androidsis
Raha mitady hanana ny fampiharana voalohany an'ny Maimaimpoana NetflixRaha tsy misoratra anarana amin'ny volana fitsarana maimaimpoana ianao dia hadinoy ny fahazoana karazana mod satria tsy misy na tsy azo atao izany.
Fa kosa, androany aho dia manolotra rindranasa izay ho an'ny tsiriko manokana dia tsara lavitra noho ny Netflix, ary ny tena zava-dehibe dia ny fangatahana mijery sarimihetsika sy andian-dahatsoratra amin'ny streaming na misintona azy ireo mivantana mihitsy aza ary maimaimpoana daholo.
1 OctoStream ny safidy Netflix maimaim-poana izay tsy tokony halainao
2 Solony tsara indrindra amin'ny Netflix na maimaim-poana
2.13 MiTele (Fampiharana sy tranonkala)
2.14 AtresPlayer (Android sy tranonkala)
2.15 DC Izao Rehetra Izao
3 Appflix, safidy hafa amin'ny Netflix izay niasa tsara
OctoStream ny safidy Netflix maimaim-poana izay tsy tokony halainao
Na dia manana kaonty ara-dalàna amin'ny serivisy mivantana mivantana aza ny ankamaroan'ny olona toa ny HBO, horonantsary Amazon Prime na Netflix, dia mahazatra kokoa noho ny eritreretintsika fa fianakaviana maro, amin'izao fotoana izao dia tsy zakan'izy ireo izany fandaniana fanampiny izany Ireo rindranasa ireo dia mihevitra fa natao ho an'ny fialam-boly ataontsika manokana sy ankohonany izahay.
Izany no antony itondrako lahatsoratra ho anao anio hanolorako ilay iray izay anio ny fampiharana tsara indrindra, ny safidy Netflix maimaim-poana tsara indrindra Ary tsy hijanona tsy manandrana aho satria azoko antoka fa ho tianao izany.
Ilay fangatahana resahina, araka ny efa nambarako tamin'ny lohatenin'ny lahatsoratra, dia tsy iza fa ny OctoStream, fampiharana misy kisary horita manga, izay nampiasako ny tenako tsy nisy olana nandritry ny herintaona na roa.
NY fampiharana dia ny fivoaran'ny lozika an'ireo rindranasa hafa izay nijanona tsy niasa taloha ela be, toy ny Appflix, MegaDeDe, MasDeDe na PlusDeDe. Fampiharana izay misy vondrona mpanohana Telegram sy fantsona, izay ametrahana hatrany ny APKs ary azonao atao ny misintona ny iray izay mifanaraka indrindra amin'ny zavatra ilainao manokana maimaim-poana.
Avy amin'ity rohy ity dia azonao atao ny miditra amin'ny fantsona fanohanana Octostream amin'ny Telegram
Avy amin'ity rohy ity dia azonao atao ny miditra ao amin'ny vondrona chat Octostream.
Avy amin'ireo tranokala roa ireo, amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ireo rakitra na fantsona fantsona, tsindrio ny anaran'ny vondrona na eo amin'ny hafatra napetaka etsy ambany, dia hahazo ny fidirana amin'ireo apk rehetra nakarina ianao ary, mazava ho azy, eo amin'izy ireo ianao tsy maintsy misafidy ny kinova farany an'ny fampiharana, ny kinova izay androany amin'ny resaka Android TV dia mifanaraka amin'ny kinova OctostreamTV_1.5.8.apk raha ny kinova mahazatra, ilay apetrakao amin'ny Smartphone na Tablet-nao no ilay kinova Octostream 1.6.10.apk.
Ireo kinova roa ireo dia azo apetraka amin'ny Android Smartphone na Tablet ary amin'ny TV Box miaraka amin'ny rafitra fiasa Android, ny mahasamihafa ny apk radika roa dia ny fampiharana antsoina hoe Android TV dia natao manokana hampiasaina amin'ny efijery lehibe, efijery tsy mikasika izay tsy maintsy ampiasaina amin'ny fanaraha-maso lavitra, ary izany no ny fampiharana Android TV dia nohamarinina ho an'ny tanjona mitovy amin'ny fampiasana miaraka amin'ny fanaraha-maso lavitra fotsiny.
Ary kely ihany no holazaina momba ny Octostream, safidy hafa maimaim-poana Netflix izay dia miasa miaraka amin'ny fomba fampivondronana ireo mpizara rehetra mampiantrano ny sarimihetsika sy ny andiany izay alefa amin'ny serivisy fandefasana karama be ankehitriny. fampiharana izay miasa tanteraka ary ahitantsika ny atiny tsara indrindra alefa amin'ny Netflix na serivisy streaming hafa toa ny HBO, Disney Plus ary na ny atiny avy amin'ny Movistar aza.
Mba hamaranana dia lazao azy ireo izany ny rindranasa Android dia mifanentana tanteraka amin'ny Chromecast handefasana ny atiny amin'ny efijery amin'ny Smart TV na Chromecast, ary koa fa misy serivisy fidirana amin'ny rindranasa, fidirana izay atao amin'ny alàlan'ny track.TV, fidirana izay ahafahantsika manana ny andian-tsarimihetsika sy ny sarimihetsika rehetra mifamatotra amin'ny terminal rehetra izay nametrahanay an'i Octostream.
Ny hany zavatra tafiditra ao amin'ilay fampiharana dia doka an-tsary feno izay maharitra 20 segondra ary mitsambikina aminao, toy ny fitsipika ankapobeny rehefa misafidy ny mpizara tianao hijerena ilay sarimihetsika na andian-tantara, ny sasany Doka voafehy loatra nefa mbola mamela anao hanaisotra amin'ny karazana mpikambana indray mandeha 2.99 Euros.
Mpikambana iray izay hanaisotra ny doka mandrakizay ary hahafahanao mamerina mivantana ny atiny avy amin'ilay sary kely izay aseho amin'ny valin'ny fikarohana an'ny rindranasa Android. Raha ny fahitalavitra android dia hanafoana ny doka aorian'ny fiainana ihany amin'ny fandoavam-bola tokana nolazaiko tetsy ambony.
Solony tsara indrindra amin'ny Netflix na maimaim-poana
Izy io no mpifaninana lehibe indrindra amin'ny serivisy mivantana indrindra satria tonga ny fanitsakitsahana azy. Azo antoka fa izy no mora indrindra, noho izany dia mety ho safidy tsara raha te hijery sarimihetsika, andian-tantara ary atiny hafa atokana ho an'ny ankizy ianao. Nanjary nilalao i Amazon tamin'ny fahafantarana fa io no # 1 amin'ny serivisy fitakiana manerantany.
Amazon Prime Video dia manana andian-tantara an-trano, izany dia ny andian-dahatsoratra toa ny The Boys, The Good Omens, American Gods ary famoriam-bola lehibe ao ambadiky ny pejy. Izany dia ampiana lisitr'ireo sarimihetsika misy ambaratonga tsara ary be dia be ny atiny ho an'ireo ankizy hampiala voly azy ireo mandritra ny ora maro.
Ny Prime Video dia manana vidiny 36 euro isan-taona, izay mitovy amin'ny 3 euro isam-bolana mandritra ireo 12 volana ireo.
Manolotra 1 volana maimaim-poana hanandramana azy io alohan'ny hanakaranao azy, hanome alalana ny atiny rehetra izay ampy raha vao miditra amin'ilay pejy ianao. Azonao atao ny miditra miaraka miaraka amin'ny fitaovana 3. Afaka mahazo ny volana maimaim-poana amin'ny Prime Video ianao ity rohy
Ny sehatra streaming dia nanolotra atiny avo lenta avo lenta tsara indrindra ary misy katalaogy midadasika. Hahafahantsika miditra amin'ny sarimihetsika Star Wars, Marvel, Pixar, National Geographic ary izay rehetra mifandraika amin'ny tontolon'ny Disney. Ny iray amin'ireo tombondahiny lehibe indrindra dia ny andian-tantara Mandalorian, tsy manam-paharoa hatramin'ny voalohany tao amin'ny Disney +, ho fanampin'izany dia hisy atiny manokana ho an'ireo mpizara.
Any Espana dia navotsotra tamin'ny volana martsa niaraka tamin'ny vidiny manintona hatramin'ny namoahana azy, afaka misoratra amin'ny 6,99 euro isam-bolana isika na misoratra isan-taona amin'ny 69,99 euro. Manana fe-potoana fitsapana mandritra ny 7 andro hahalalanao azy ary raha tianao ny mankafy azy amin'ny fandoavana ny isa samihafa atolotray.
Disney + dia hamela ny mpampiasa hatramin'ny play maximum 4 miaraka. Ny famandrihana dia natomboka tamin'ny vidiny ambany kokoa, satria nanome ny safidy hisoratra anarana mandritra ny herintaona latsaky ny 10 euro, izay mitovy amin'ny 59,99 euro. Tamin'ny volana febroary koa dia nisy ny safidy hanakaramana ny serivisy 5 euro latsaka.
Tsy isalasalana fa iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra misy amin'ny fitaovana Android ity hijerena andian-tsarimihetsika sy sarimihetsika, anisan'ireo andiany ireo The White Princess sy The Capture, izay samy fahombiazana lehibe hatramin'ny nialany, ary koa ireo hafa toa ny The Act, Power and Pennyworth ary lisitra lava misy.
Ny sarimihetsika vaovao sy ny andian-tantara manokana dia nampiana isam-bolana, misy kalitao HD izy ireo ary manolotra fampidinana ahafahana mahita azy ireo tsy misy Internet na aiza na aiza, zavatra manan-danja raha mandeha na mandeha amin'ireo toerana tsy misy fandrakofana isika. Izy io dia manana motera fikarohana tsara hahitana andian-tantara sy sarimihetsika.
Manana fe-potoana fitsapana mandritra ny 7 andro izy, azo foanana amin'ny fotoana rehetra raha tianao. Ny vidin'ny famandrihana isam-bolana dia 4,99 euro isam-bolana.
Izy io angamba no iray amin'ireo tsy dia fantatra loatra, na eo aza izany dia miasa any Etazonia ny serivisy ary raha te-hanakarama azy isika dia tsy maintsy mampiasa VPN hahafahana mankafy azy amin'ny solosaina na finday. Mila manao ny diany any amin'ny firenen-kafa ianao raha te hifaninana amin'i Amazon, Disney + na Netflix mihitsy.
Hulu dia manome fidirana amin'ireo fantsom-pahitalavitra sy studio 200 eo ho eo, ny katalaogy koa dia ahafahantsika mijery sarimihetsika, andian-tantara, fampisehoana an-tsary ary fifaninanana raha vantany vao miditra amin'ny fidirana amin'ny anarana mpampiasa sy teny miafina isika. Misy ihany koa fonosana fantsona fantsona premium sy fahitalavitra mivantana any Etazonia.
Ny fonosana fototra dia mitentina eo amin'ny $ 5,99 (5,44 euro hanovana) ho an'ny fonosana fototra, ary arakaraka ny tadiavinao ny fonosana premium dia hiakatra amin'ny $ 30-40 fanampiny. Ny fananahana miaraka dia hatramin'ny roa farany ambony.
Izy io dia iray amin'ireo pejy vitsivitsy izay manome atiny maimaimpoana maimaimpoana maimaimpoana, manome serivisy mandritra ny taona maro. Safidy ara-dalàna io, amin'ity tranga ity dia mila VPN isika hahafahantsika mahita ny zavatra rehetra atolotra amin'ny Internet rehefa miditra isika. Mifantoka amin'ny sarimihetsika sy andian-tantara izany.
Betsaka ny sarimihetsika sy andian-tantara tamin'ny taona maro lasa izay, manasongadina horonantsary izay fahombiazana tany Espana toa an'i Crocodile Dundee (1983), fa tsy izy irery ihany, afaka mahita ny hafa toa ny Stray Bullets na Time amin'ny tena izy koa isika pejy.
Tsy mila famandrihana, maimaim-poana ny fidirana amin'ny VPN.
Ny filokana vaovao an'i Movistar dia ny handefa ny Movistar + Lite, serivisy azontsika raisina nefa tsy misy serivisy teo aloha hankafizanay afa-tsy atiny manokana avy amin'ity sehatra ity sy ireo sehatra hafa. Miaraka amin'izany dia te hanana ambaratonga mitovy amin'ny HBO, Netflix sy ilay Disney + voalaza etsy ambony any Espana sy any amin'ny faritany hafa iasanany izy.
Anisan'ireo atiny lehibe homena azy ireo rehefa tafiditra isika ny andianteny toy ny "Game of Thrones", Mad Men, Orange no New Black, House of Cards ary maro hafa, misy ihany koa ireo programa toa an'i La Resistencia nataon'i David Broncano sy ny fanatanjahantena hetsika, ankoatry ny zavatra maro hafa.
Ny serivisy Movistar + Lite dia mitentina 8 euro isam-bolana ary hamela ny filalaovana indray mandeha miaraka amin'ny fitaovana roa farafahakeliny amin'ny fotoana iray. Izy io dia manana tolotra hahafahana mampiasa Movistar + Lite mandritra ny iray volana amin'ny vidiny aotra, zavatra izay tsy azonao adino raha tianao ny manandrana azy ary avy eo mijanona eo amin'io sehatra io.
Izy io dia serivisy mivantana izay mety tsy ho diso amin'ity lisitra ity, satria izy io no iray amin'ireo lehibe indrindra amin'ny atiny natolotry ny sehatra raha vantany vao azontsika ny fidirana voalohany amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana. Ny kalitao dia mihoatra ny habeny amin'ity sehatra ity, na eo aza izany, tsikelikely dia manana taha ambony kokoa amin'ny sarimihetsika, horonan-tsary ary fanadihadiana.
Betsaka ny sarimihetsika maherifo isan-karazany, andian-dahatsoratra toa ny Silicon Valley, The Sopranos, Veep, Chernobyl na ilay "Game of Thrones" malaza, ity farany ity dia iray amin'ireo andiana serivisy notsidihina indrindra tato anatin'ireo volana maro taorian'ny nanombohan'ny valan'aretina COVID - 19.
Ny HBO any Espana dia manolotra fe-potoana fitsapana mandritra ny 2 herinandro alohan'ny hanakaranao azy, na dia afaka misafidy ny hanakarama azy mivantana aza ianao raha te hahita azy isam-bolana. Ahafahan'ny playback amin'ny fitaovana 2 miaraka.
Sky dia efa miasa ao Espana miaraka amin'ny serivisy fandefasana kalitao tena tsara. Toy ny serivisy hafa, manome antsika fidirana amin'ny andian-dahatsoratra, fandaharana, sarimihetsika ary fantsom-pahitalavitra amin'ny ambaratonga avo lenta izy io, be dia be ny katalaogna ary afaka jerentsika aza ny sarimihetsika na aiza na aiza avelantsika azy, ankoatry ny fahafaha-manao hafa noho ny mpanjifa playback.
Raha vantany vao nifanekena isam-bolana ny serivisy, dia hahafahanao mijery fantsona toy ny MTV, Canal Historia, Fox, SyFy na Nickelodeon, ankoatran'ny fantsom-pahitalavitra 12 hafa an'ny 16 ananan'ity serivisy ity. Hahafahantsika mijery programa sy andian-tsarimihetsika fandefasana fantsona fanta-daza hafa any Espana na any ivelany koa izany.
Sky Spain, toy ny fifaninanana, dia manome iray volana maimaim-poana aorian'ny fisoratana anarana, aorian'ny 6,99 euro isam-bolana dia vidiny. Hamela ny filalaovana amin'ny fitaovana telo indray miaraka, iray hafa noho ny sisa amin'ny serivisy.
Nanapa-kevitra i Rakuten fa hividy Wuaki.tv, sehatra Espaniola izay manana mpanjifa maro hatramin'ny nanombohan'ny serivisy fitakiana amin'ny Internet. Ankehitriny amin'ny anarana hoe Rakuten TV dia iray amin'ireo mpisava lalana amin'ny fandefasana taona maro lasa izay ary mbola miasa hatrany noho ny Japoney.
Izy io dia manana katalaogin-dahatsoratra sy sarimihetsika lehibe kendrena ho an'ny tanora mpihaino, na dia marina aza fa mifanaraka tsara amin'ny sarambabem-bahoaka izy ireo raha te hahita sarimihetsika amin'ny fotoana rehetra ianao amin'ny fampifandraisana fotsiny. Rakuten TV dia manana faritra antsoina hoe Videoclub izay ahafahanao mandoa vola hijerena ny atiny manokana, ao anatin'izany ny sarimihetsika maro izay mivoaka avy amin'ny sinema ary azo idirana ao amin'ny biraon'ny boaty.
Ny vidin'ny famandrihana dia 7,99 euro isam-bolana, na dia amin'ny alàlan'ny pejy aza dia manome volana fitsapana maimaimpoana izy ireo hanandramana ny serivisy tahaka ny ataon'ny serivisy streaming hafa, na dia mitaky anao aza izy ireo hiditra ny angona manokana. Manolotra playback miaraka amin'ny fitaovana 2.
Ny lohan'ny horonantsary niavaka dia efa nanolotra ny safidy afaka mahay manofa na mividy sarimihetsika sinema isan-karazany, ny lafy ratsy dia tsy afaka manasokajy azy ireo amin'ny filaharan'ny abidia na mitady amin'ny karazan-dahatsoratra, zavatra iray izay tsy maintsy amboarin'izy ireo raha te hanana ny besinimaro.
Raha vao miditra amin'ny YouTube.com ianao dia tsy maintsy apetraka ao amin'ny motera «Sarimihetsika» ary hanomboka hanome anao ny safidin'ny maro amin'izy ireo, amin'ity tranga ity ny ambony dia ny atiny takian'ny mpanjifa indrindra, amin'ity tranga ity ny iray amin'ny «Bad Boys for Life», 1917, anaty rano na ny DoLittle, ankoatry ny maro hafa.
Ny vidin'ny hofan-trano na ny fividianana ny sarimihetsika dia miankina amin'ny iray nofidinao, ohatra, Bad Boys for Life dia manana vidin'ny 3,99 euro sy vidin'ny fividianana 9,99 euro, manome ny safidy hijerena azy amin'ny fanapahan-kevitra samihafa, ao anatin'izany ny 4K.
Web: Sarimihetsika Youtube
Izy io no manana katalaogim-panatanjahantena lehibe indrindra, nahazo ny zon'ny MotoGP manontolo, ankoatry ny hetsika ara-panatanjahantena mivantana, anisan'izany ny fananana ampahany lehibe amin'ny baolina kitra iraisampirenena amin'ny fampidirana ny praiminisitra amin'ny grill. League, the Italian Cup, ny fiadiana ny amboara amerikanina tatsimo, ny j-ligy, ny MLS ary baolina maro hafa avy any ivelany. Izy io koa dia manana ny Euroleague sy ny fanatanjahantena maro hafa toy ny Tenisy, Cycling, sns ...
Ankoatr'ity fanatanjahantena rehetra ity dia misy ny fantsona Eurosport 1 sy Eurosport 2 ao amin'ny HD, fantsona roa mandefa mivantana ary afaka mijery hetsika hafa mihemotra aza isika, ankoatry ny fahafaha-manao hafa.
Ny DAZN dia manome 1 volana maimaim-poana amin'ity ora ity, avy eo 9,99 volana na 99,99 euro ny vidiny ho an'ny famandrihana isan-taona. Tsy manana faharetana izy io, mety hamarana ny fifanarahana amin'ny fotoana rehetra ny mpanjifa.
DAZN: Fanatanjahantena mivantana
Izy io dia iray amin'ireo rindranasa Android feno indrindra amin'ny zavatra atolotray rehefa ampiasaina ilay fampiharana. FuboTV dia serivisy mivantana izay azo ampiasaina amin'ny solosaina, telefaona finday, takelaka na fitaovana hafa mifanaraka aminy. Azo antoka fa safidy tsara ho an'ny Netflix izany amin'ny alàlan'ny fampidirana fantsona DTT.
FuboTV dia manasongadina ny andiany iraisam-pirenena tsara indrindra, ao anatin'izany ny Game of Thrones, Outlander, Shameless, Jane the Virgin, Miliara ary maro hafa. Ahitana ny fantsona Movistar Series misy atiny foronina tsara indrindra, fantsom-pifandraisana maimaim-poana toy ny Antena 3, TVE-, Neox, Nova, Teledeporte, La Sexta ary maro hafa azo ampiasaina. Izany rehetra izany dia ampiana ny fanolorana hetsika ara-panatanjahantena raha toa tsy dia kely aminao ilay voalaza etsy ambony ary mamela ny firaketana mandritra ny 30 ora maimaimpoana handrakitra ny programa tadiavinao.
Manome ny fahafaha-manandrana ny serivisy maimaimpoana mandritra ny 7 andro, avy eo 2,99 Euros ny saram-bolana.
fuboTV: Series, Sarimihetsika ary fahitalavitra mivantana.
MiTele (Fampiharana sy tranonkala)
Io no sehatra niomerika an'ny Mediaset Spain, manome atiny araka ny tinady sy mivantana izy. Anisan'ireo fantsona misy i Telecinco, Cuatro, FDF, Energy, Divinity ary Be Mad, azo idirana daholo izy ireo rehefa apetrakao ilay rindranasa.
Anisan'ireo fiasa ampiasainy ny manampy ny atiny ao anaty lisitrao, mampiditra ankafizinao, mametra ny fitetezana zaza tsy ampy taona noho ny fanaraha-mason'ny ray aman-dreny, jereo ny atiny namelanao azy, kalitaon'ny HD an'ireo horonan-tsary ary afaka mifanerasera amin'ny bokotra ON ianao. Noho ireo fantsona ireo dia ho hitanao ny andiany toa an'i La que se Avecina, Castle, fantatro hoe iza ianao, Castle, Grey's Anatomy, Cobra Alert ary lisitra tsara amin'ny vanim-potoana rehetra.
MiTele no fampiharana maimaim-poana, na dia misy aza safidy ahafahana manao fifanarahana MiTele Plus amin'ny 3 euro isam-bolana na 30 euro mandritra ny taona iray manontolo hanafoanana ny dokam-barotra sy ny fidirana amin'ny atiny manokana, anisan'ny ahafahana manao fifanarahana LaLiga, ilay Tompondaka amin'ny hetsika ara-panatanjahantena hafa amin'ny vidiny izay hiovaova arakaraka ny safidinao ny fonosana iray na ny iray hafa.
Mitele - TV amin'ny fangatahana
AtresPlayer (Android sy tranonkala)
Ampio ny fantsom-pahitalavitra DTT rehetra, anisan'izany ny tena Antena 3, ao koa ny Mega, Neox, Nova, LaSexta ary Atreseries, ny fantsona mivantana rehetra ary afaka miditra amin'ny atiny ianao amin'ny fotoana nandaozanao azy, ankoatry ny fananana lisitra ho hita milamina.
Noho ireo fantsona ireo dia azonao atao ny mijery ny vaovao, savony, atiny ho an'ny ankizy, horonantsary fanadihadiana, programa, sarimihetsika, andiam-pirenena sy iraisam-pirenena. Hisy ihany koa ny hetsika ara-panatanjahantena raha toa ka mandefa azy ireo amin'ny iray amin'ireo fantsona maimaim-poana ireo.
Atresplayer dia rindrambaiko maimaimpoana, azonao atao koa ny mijery ny atiny ao amin'ny takelakao, solosainao ary ireo fitaovana hafa. Atresplayer dia efa nanolotra Flooxer efa ela, izay kaonty premium hijerena ny atiny manokana, opera savony, horonantsary fanadihadiana, andian-tsary ary koa sarimihetsika amin'ny HD na 4K. Ny vidin'ny Flooxer dia 2,99 euro isam-bolana ary 29,99 euro isan-taona, na dia mamela anao hanandrana azy maimaim-poana aza mandritra ny fotoana fohy - tsy voafaritra -.
ATRESplayer - Series, películas ary fahitalavitra an-tserasera
Ny sehatra streaming streaming DC Entertainment sy Warner Bros dia efa nisy hatry ny ela. Hanome safidy ny fahafahany manao andian-tsarimihetsika, sarimihetsika ary na dia sary mihetsika an-tsary aza amin'ny kalitao tena tsara. Raha mpankafy ny sarimihetsika Justice League, Superman na Batman ianao, dia tsy isalasalana fa io no safidy tsara indrindra.
Tsy miompana amin'ny andian-tsarimihetsika na sary mihetsika fotsiny izy io, fa izy ireo koa dia manomboka amin'ny andiany toa ny Doom Patrol, The Swamp Thing na Titans, izay nahavita nanintona ny sarambabem-bahoaka tany Etazonia Afaka mampiasa azy io any Espana. mila VPN ianao, satria tsy miasa any Espana amin'izao fotoana izao.
Ny vidiny isam-bolana dia $ 7,99 (7,27 euro amin'ny fanovana). Azo ampiasaina amin'ny fitaovana 2 farafaharatsiny farafaharatsiny.
Web: DC Izao Rehetra Izao
Appflix, safidy hafa amin'ny Netflix izay niasa tsara
Lavitra ireo fampiharana toa ny SeriesDroid ary PelisDroid, ho ahy eny Mbola iray amin'ireo rindranasa tsara indrindra hijerena sarimihetsika sy andian-tsarimihetsika maimaimpoana izy ireo, ireo dia mamela be dia be tadiavina amin'ny resaka famolavolana endrika satria navela niaraka tamin'ny interface efa lany andro izy ireo ary lavitra ny fampiharana toa ny MasDeDe apk o PlusDeDe na ity rindranasa androany ity dia tiako aseho sy atoro anao indrindra indrindra.
Ny fampiharana izay tiako aseho anao anio, fampiharana izay mamaly ny anaran'ny AppflixMahagaga fa farafaharatsiny farafaharatsiny izao, ho azontsika atao ny misintona azy mivantana avy amin'ny Google Play Store amin'ny alàlan'ny rohy mivantana avelako eo ambanin'ireto andalana ireto:
Raha amin'ny fotoana amakianao ity lahatsoratra ity dia hitanao fa tsy ao amin'ny Google Play Store intsony ilay fampiharana Appflix satria efa nesorina, aza manahy satria Avy amin'ny Communitysis Communitysis ao Telegram dia apetrakay aminao ny APK mba hahafahanao misintona azy amin'ny irery kitiho amin'ity rohy ity ihany na manontania mpanelanelana amin'ny vondrona Android tsara indrindra amin'ny Telegram. Ampahatsiahiviko anao fa ny mpanelanelana ankehitriny dia @jorgealejo, @Dezfachate, @AdemirFree, @VampireFromNazareth ary ny tenako @pakomola.
Ny Appflix dia mampiasa rafitra mitovy amin'ny fampiharana toa ny SeriesDroid S2 sy PelisDroid S2 na dia miaraka amina fampiasa an-tserasera aza ny mpampiasa dia mila mahafinaritra sy mahomby kokoa ny marina noho ireo rindranasa roa natolotro anao ireo. Noho izany, amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny fampiharana fotsiny no hidirantsika, tsy mila fisoratana anarana na karazana fidirana hafa, amin'ny sarimihetsika sy andian-tsarimihetsika maimaim-poana be dia be hijerena ny streaming na misintona ny atiny mivantana amin'ireo terminal Android.
Fifanarahana tena tsara toy ny karatra hita maso avy amin'izany no ahafahantsika mivezivezy amin'ny atiny rehetra atolotra amin'ny lohamilina ivelany mankany amin'ny fampiharana.
Ao amin'ny Appflix no ahitantsika ireo atiny rehetra nampiantranoina tamin'ny mpizara samihafa voasokajy tsara mba hahitana sy handaminana izay tianay ho hita amin'ny fomba tena tsotra sy milamina. A) Ie manana sokajy lehibe roa toa ny Sarimihetsika sy andiany izahay, izay ao anatin'izy ireo no ahitantsika ny atiny voasokajy isan-karazany, ankafizinay ary safidy antsoina hoe Discover izay hanoroana atiny an-tsokajina nosokajian'ny Popular, Billboard ary ny laharana tsara indrindra raha ny sokajy sarimihetsika sy ny malaza, navoaka anio na amin'ny nomerao in ny raharaha andiany.
Isaky ny karatra aseho amintsika fa samy ao amin'ny sokajy sarimihetsika sy andian-tsarimihetsika, eo amin'ny ilany ankavanana ambony dia aseho ny fo iray izay amin'ny alàlan'ny fanindriana azy fotsiny dia ho mena miloko, ka mamela ilay sarimihetsika na andian-tsarimihetsika nampiantranoina ny sokajy sarimihetsika na andian-tsarimihetsika ankafizinay ary afaka miditra amin'ny fomba haingana kokoa ny atiny voamarika.
Amin'ny alàlan'ny fanindriana ny karatra misy ny sarimihetsika na andian-tantara, ankoatra ny fahitana ireo mpizara rehetra anaovana ilay sarimihetsika na andian-tsarimihetsika, ary koa ny kalitao na ny fiteny, Hita koa ny fampahalalana momba ilay sarimihetsika na andian-tantara resahina, mety ahitanao ny tranofiara na ny tranofiara misy raha te hahalala raha tiantsika alohan'ny hahitantsika azy io, na safidy tena mahaliana izay manoro ny atiny mitovy amin'ilay voafantina.
Ho an'izany rehetra izany sy ny maro hafa, ho ahy anio ary mampitaha ny Appflix amin'ireo rindranasa hafa hijerena sarimihetsika sy andian-tsarimihetsika maimaim-poana, heveriko fa tsy isalasalana fa teo aloha isika ny fampiharana tsara indrindra hijerena sarimihetsika sy andian-tsarimihetsika maimaim-poana. Misy ihany koa ny vahaolana hitanao amin'ity Lisitry ny pejy mitovy amin'ny Plusdede.
Eo an-tampon'ny lahatsoratra dia namela anao horonantsary iray aho izay anehoako anao amin'ny antsipiriany ireo lafiny rehetra mahaliana indrindra amin'ny fampiharana ary ambonin'izany rehetra izany, asehoko anao ny fomba fampiasana azy tsara amin'ny mijery sarimihetsika maimaim-poana sy andian-tsarimihetsika maimaim-poana, na amin'ny streaming mivantana, ary ahafahana misintona azy ireo hijerena azy ireo fa tsy mila fifandraisana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Streaming » Fampiharana tsara lavitra noho ny Netflix ary maimaim-poana tanteraka
trouxx dia hoy izy:
Hampidina azy io aho fa noraranao tsy ho ao amin'ny fantsonao telegram aho noho ny filazako zavatra mazava sy ny fihetsiky ny mpitantana anao
Mamaly an'i trouxx
Miavaka ny mpitantana Android na mpanelanelana ary misaotra amin'izy ireo fa azo atao ny mampiasa vondrom-piarahamonina misy mpikambana mihoatra ny 8300.
Raha voarara tsy ho ao amin'ny vondrona ianao, dia angamba noho ny fandikana ny fitsipiky ny fiaraha-miaina matetika mihoatra ny indray mandeha.
Walker dia hoy izy:
Tsy maninona ny "tsara kokoa noho ny Netflix" ary maimaim-poana. Ahoana no hitantanana ny fandoavana ny zon'ny mpamorona amin'ny tompony toa ny nataon'i Netflix?
Mamaly an'i Walker
Mialà amin'ny fetra?
Mamaly an'i G
Ampidiro ny Communitysis Communitysis ao amin'ny Telegram ary ampidino avy eo ilay APK izay nakarinay sy nodinihinay.
Uuffff amin'ny lafiny iray dia tiako ny fotoana hitadiavana fampiharana vaovao ary atoro azy ireo saingy mahatsiaro ho tsy mahazo aina aho mahita ny atiny tsy ara-dalàna. Fantatro fa tsy nanondro basy ahy izy ireo hampiasako izany fa mijanona ao amin'i Netflix aho.
Gfreiller dia hoy izy:
Inona ilay lamba bilaogy. Famafana ny fahano amin'ny 3… 2… 1
Mamaly an'i Gfreiller
Hitako fa manenina tanteraka aho raha manao doka fampiharana mamela anao hamerina atiny piraty.
Ity lahatsoratra ity dia tena mitovy amin'ny iray hafa nosoratanao tamin'ny 1 Oktobra 2017 miaraka amina lohateny mitovy: «Tsara kokoa noho Netflix ary afaka tanteraka !!. Misy Plusdede ao amin'ny Google Play Store ».
Lazaiko aminao ilay zavatra nolazaiko anao ihany:
- Manana doka
- Tsy mandeha ny rohy sasany
- Milalaova atiny tsy ara-dalàna
- Tsy fantatray raha mbola misy ao amin'ny Play Store io.
Saingy, izy io (betsaka!) Tsara kokoa noho i Netflix.
Voafetra ny fampiharana rehefa apetrakao ao amin'ny Play Store, fa rehefa manandrana milalao atiny vitsivitsy ianao dia manome rohy hametraka azy io indray avy eo ivelan'ny trano fivarotana ary any raha feno izany dia tena tsara ny marina
jaivinha dia hoy izy:
Maimaim-poana !!!!!!! fa na dia tsy misy fibre optika aza dia hitako ny tsiranoka, farafaharatsiny eto Chile miaraka amin'ny 8 megabytes ADSL hitako ny Netflix tsy misy latency ary mizaha ity rindrambaiko ity miaraka amin'ny optika 40 MB, tsy hitako akory ny sarimihetsika 2 minitra ……. .Malalaka !! !!!! hahahaha ho afaka io fa moka.
Mamaly an'i jaivinha
Adrián avy amin'i Rafael Calzada dia hoy izy:
Tsy mandeha izy io rehefa mametraka sarimihetsika dia manafoana ny efijery ary manome anao safidy "manandrana aoriana". Fandaniana fotoana ve?
Valiny tamin'i Adrián de Rafael Calzada
Misy ny anganon'ny lalao Riot an'ny Runeterra ankehitriny - Lalao ligin'ny ligin'ny legiona
Ny anaran'ny fanontana Mi 10 ho an'ny tanora vaovao Xiaomi dia ho Mi 10 Lite Zoom iraisam-pirenena